नेकपाका यी तिन नेताको राज समाप्त « Pathibhara Post
नेकपाका यी तिन नेताको राज समाप्त
अहिले नेपालमा साढे दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टी रहेछन् । एउटा केपी ओलीको, अर्को पुष्पकमल दाहालको अनि आधाचाहिँ हामीजस्ताको । उहाँहरू दुवैको सिद्धान्त एउटै रहेछ – मलाई चाहियो पद र प्रतिष्ठा । अरूको कुरो अरूले नै बताउलान् । हामीजस्ता चाहिँ विगत सम्झिने पश्चगामीजस्ता रहेछौँ, पुराना राम्रा कुराहरू कहिल्यै बिर्सन नसक्ने रहेछौँ ।
मैले हामी भनेको पुराना माले (माक्र्सवादी लेनिनवादी) हरू । मैले मर्चवारमा सात रात बिताएको थिएँ डा. के.आई. सिंहका पुराना सैनिकहरूसँग । उनीहरूमा पछुतो थियो के.आई. सिह भागेर चीन गएकोमा । आपूm टुहुरा भएका थिए तिनीहरू । म भोजपुरको मान्छे । दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेवापत भोजपुरका रामप्रसाद राईलाई कठोर दण्ड दिने गरी कारागारमा थुनिएको थियो । भोजपुर मुक्तिसेनाले आफ्ना नेतालाई जेलबाटै मुक्त गरायो तर नेपालमा बचाएर राख्न सकेन । उनी पनि के.आई. सिँहसँगै लागे । तर उनी चीन पुग्न पाएनन् । बीचैमा उनको जीवन लिला समाप्त भयो ।
आजको रसुवा अथवा नुवाकोटको जमिनमा उनको जीवन समाप्त भयो ! यसरी नै आफूले देखेको सपना आपूmसँगै लिएर गए हजारौँ योद्धा । यो त ००७ सालको कुरो भयो । ००७ साललाई सारै पुरानो कुरो भन्न पनि छुट छ तपार्इंलाई । तर पुष्पलालले त्यही ००७ सालको क्रान्तिलाई अपूर्ण क्रान्ति भन्नुभएको छ । हो, यही ‘अपूर्ण’ शब्दले जोड्छ सबै परिवर्तनहरूलाई । पछि संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलन थियो । संसद् त पुनस्र्थापना भयो । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला, रामशरण महत र महेश आचार्यको चक्रव्युहमा परेर त्यो पुनस्र्थापित संसद् त जनताको हित नगर्ने दिशातिर पो लाग्यो । अर्थात्, पुनस्र्थापित संसद्ले पनि पूर्णता पाउन सकेन । फेरि आन्दोलन भयो जनअधिकारको रक्षाको नाममा अनि आइपुग्यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र । जनताका योग्यतम प्रतिनिधिले गणतान्त्रिक सङ्घीय लोकतन्त्रको संविधान जनतालाई दिए । यति ठूलो परिवर्तन भए पनि जनताले के पाए ? उही अपूर्ण समाजवाद ।
अहिले नेताहरूलाई स्वतन्त्रता पनि आएको छ । सत्ता पनि आएको छ । तल केही भएको छैन भन्ने पनि मेरो भनाइ होइन । भएको छ, धेरै भएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । मैले धेरैपटक भनेको केपी शर्मा ओलीले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारपछि धेरै काम गर्नुभएको छ र राम्रा काम पनि भएका छन् भनेको पनि छु । नेपाली जनताभित्र एउटा आत्मविश्वासको बीउ रोप्नुभएको छ, जो नेकपाका अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले गर्न सकेका थिएनन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सक्नुभएन । किनभने उहाँले पनि त्यो उमेर समूहका अरू नेताजस्तै माक्र्सवाद पढ्नुभएकै थिएन् । उहाँको दिमागबाट लेनिनवाद नै अन्तिम हो भन्ने अधिनायकवादी सोच मरेकै थिएन । समाजवाद सबै क्षेत्रमा पुँजीवादभन्दा उत्तम हुनुपर्छ भन्ने सोच उहाँको दिमागमा आउनै सकेन । पुँजीवादले पुँजीपति वर्गलाई मात्र स्वतन्त्रता दिन्छ । तर समाजवादले आफ्ना सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । ‘स्वतन्त्र नागरिकहरूको समाज नै समाजवाद हो ।’ त्यसैले आपूmलाई समाजवादी भन्नेहरू आरम्भदेखि लोकतान्त्रिक आचरण, सबैलाई आपूm समान मान्नुपर्छ । जतिसुकै कनिष्ठ भए पनि एउटा केन्द्रीय सदस्य आपूm बराबरको हो भन्ने भाव राख्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो हुनु सम्भव छ ? छैन ।
‘राष्ट्रपति महोदय’ मैले बोलेका कारण नखानु घच्ची खाएकै छु । (राष्ट्रपतिबाट चाहिँ होइन है फेरि) । बाहिरका धेरैले केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका छन्, हाम्रोचाहिँ किन गरिएन भनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले चित्त दुखाउनु भएन । पुष्पकमल दाहाललाई थाहा थिएन रे लौ, तर माधव नेपाललाई त थाहा थियो नि केपी ओली साह्रै अप्ठ्यारा मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँलाई गलाउन फलाम गलाउनुभन्दा गाह्रो काम हो भनेर । केपी ओलीका बारेमा राधाकृष्ण मैनालीका टिप्पणीहरू वास्तविक र सटिक हुन्छन् भनेर । उसैमाथि जितेर आएका अध्यक्ष । यसो भनेर मैले केपी ओलीको पक्षपोषण गरेको होइन ।
म जति पीडित त को भयो होला र पार्टीमा । आफैँले मन्त्री बनाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि जलस्रोत मन्त्री । तर अन्त्यमा जलस्रोत मन्त्री म त भइनँ । तीन वर्ष म मरेको छु कि जिउँदै छु, पार्टी अध्यक्ष भएर हिसाब नराख्ने मान्छेको नाउँ केपी ओली नै हो । तर व्यक्तिगत कुरामा रिसाएर के पाइन्छ ? हामी कसैलाई राजदूत, संवैधानिक नियुक्ति दिलाउन नेता भएका होइनौँ । हामी त समाज फेर्न पो हिँडेका हौँ ।
समाज फेर्न सबैभन्दा पहिले आफैँलाई फेर्न पर्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद कुनै त्यस्तो बुटी होइन जसलाई घाँटीमा बाँध्ने बित्तिकै सबै पाप पखालियून्, नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले ‘जननायक बीपी कोइराला’ भनेर पाप पखालेजस्तै । नेकपाका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको राज सकियो भन्दा हुन्छ अब । केपीलाई त्यसैमा समेट्दा पनि हुन्छ । ‘अबको महाधिवेशनमा म अध्यक्ष हुन्न’ उहाँले भन्नुभएकै छ । त्यसैले अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल (सर्प नपाल्ने सर्तमा) पुष्पकमल दाहालले पनि अब धेरै भयो भन्नुभयो भने नेपाल ‘सुखी र समृद्ध’ हुने बाटातिर लाग्ला । नत्र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले ‘म खाउँ मै लाउँ सुखसयल वा मोज मगरुँ …चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी’ भनेर लेखिदिनु भएकै छ नि । तर चितामा चेतना हुँदैन होला ।
अहिले गाला बजाएर भाषण गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हाम्रै अनुसन्धान आयोगले डामेको होइन र ? त्यतिबेला मैले लेखेको थिएँ–अध्यक्ष एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादीको भनेर । अनि उहाँले नै सागर पार गराइदिनु हुन्छ भनेर तपाईंलाई कुन पण्डितले भन्यो ? यो प्रश्न मैले मेरा नेता माधव नेपालसँग गरेको हुँ ।
सबैलाई सार्वजनिक गराइदिउँ–म माधव नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छु ससर्त । त्यो सर्त हो – माधव नेपाल भएको पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नै पर्छ । हुँदैन भने त्यो पार्टीलाई अस्वीकार गरेर हिँड्ने मैले आफ्नो स्वतन्त्रता सुरक्षित राखेको छु ।
प्रचण्डलाई पनि मैले बेलैमा सम्झाउनुपर्छ–म कसैलाई धोका दिन्न र तपाईंलाई पनि दिन्न । मैले तपार्इंसँग एकताको कुरा गरिरहँदा भनेको थिएँ–मोहन वैद्यले छोड्नुभयो, बाबुरामले पनि छोड्नुभयो, एक्लै किन बस्नुहुन्छ ? आखिर हामी सबैको ‘प्राक्टिस’ जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो । आउनुस्, सँगै हिँडौँ । तपाईंलाई वरिष्ठ नेता बनाउन म लागिपर्नेछु र यसमा म सफल पनि हुनेछु ।’ तपाईं आउनु त भयो । तर राम्ररी चलेको पार्टीमा भुँवरी चलाउनुभयो । यो त अलिक राम्रो भएन नि कमरेड !
(लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ । यो लेख सम्पादकको अनुमतिले गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)
डियर ‘कुमारी दिदी’ तपाइँको “कुमारित्व”भङ्ग गर्ने त्यो भाषण
डियर ‘कुमारी दिदी’ हो “बोल्न पाइन्छ” हामिले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ! डियर “कुमारी दिदी”
प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न देऊ
निर्मल भट्टराई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी आज जारी अध्यादेश यही अदम्य साहसको परिणाम हो । सरकारलाई प्रतिपक्षबाट
जसका लागि गोठ बन्यो उसकै पुच्छर बाहिर !
अनिलभक्त खरेल नेपालबाट विधिवत रूपमा राजा र हिन्दुधर्म फालिएको पनि १२ वर्ष पूरा भैसकेको छ
कामरेड प्रचण्ड, यस्तो व्यक्तिगत कुण्ठाले विकास र समृद्धिको यात्रा सफल बनाउला ?
काठमाडौं, २९ कार्तिक– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको दुई अध्यक्षबीचको पत्रयुद्धले समाधानको वातावरण निर्माण गर्छ
प्रचण्डकाे दाउ विघटनकाे विराेधमा रहेका सबै दलसँग सहकार्य गर्ने, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने